moobeelkaa tuugada ma dhameeyeen.............
Shabkada Maadow :: Qeebta Barnaamijyada Computarka Share |
Subject: moobeelkaa tuugada ma dhameeyeen............. Sat Feb 27, 2010 11:43 pm
saan umalaynaayo dadbadan waa lagu wareeriyay mobeeladooda ina boojeeyo ama in laga jeebsiibo.
waa kanaa war cusub ayaan idin hayaa
nin ingiriis ah aa wuxuu soo ikhtiraacay barnaamij loogu hortagaya tuugada.
nikaas daabaan la yirahdo aa mar uu u la hadlayay wakaaladah wararka aa wuxuu sheegay qofka markuu lawareego qof kale mobeelkiisa si sharci daro ah inuu soo saarayo mobeelkaas qeel,qeelidaasi oo ah mawjado raadiyoo taasoo iskugu gudbeeso dhinaca bulutuuthka .
barnaamijkaasi aa qeelida wuxuu soo saaraa markuu qofkaas kaa dheeraada toban mitir.
barnaamijkaas aa waxaa suqa lasoo galin doonaa sanadka danbe bisha july asigoo barnaamijkaas loogu magacdaray ((amigo)).
waxaan warkaan kasoo xiganay
Shabkada Maadow :: Qeebta Barnaamijyada Computarka